ဇာတိမြေ (သန်.ဇင်မင်း): စာနာမှုနဲ့ ဖေးကူပါ
ယာက် အစစအရာရာ ပြည့် စုံတဲ့ အတိုင်းအဝိုင်းထဲ့ က တစ်ဦးတည်းသောသားဆိုပါတော့ ။ အဲ့ ဒီလူငယ်လေးက အထက်တန်းကျောင်းအောင်ပြီးတာနဲ့နိုင်ငံအတွက် စစ်မှုကိုထမ်းချင်တယ်လို့ မိဘကိုခွင့် ပန်ခဲ့ သတဲ့ ။ မိဘကလည်း မိမိနိုင်ငံအတွက် လုပ်တဲ့ အလုပ်ပဲ့ ကောင်းတာပေါ့ ဆိုပြီးခွင့် ပြုခဲ့ တယ်။ တစ်နေ့ မှာ မူ နိုင်ငံ့ တာဝန်ကို ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာ ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အမိန့် စာ ရလေသတဲ့ ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူကြီးလူငယ်တိုင်းသိတဲ့ ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲကြီးထဲ့ ကိုပေါလေ။ ထိုစစ်မြေပြင်ထဲ့ ၌သုံးနှစ်ခန့် ကြာသောအခါ စစ်သားလေး သူ့ အမေကိုဖုန်းဆက်သည်။ ပုံမှန်ပြောနေကျစကားတွေကိုမပြောတော့ ပဲ့ ဒီတစ်ခါမှာ.. "သား"..အမေ...သားမကြာခင်တစ်လလောက်ဆိုပြန်လာတော့ မယ်။ အလားတူပင် နှစ်ရက် အကြာတွင် ယခင်က စကားအတိုင်းထပ်ပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်ပြန်သည်။ တစ်ရက်အကြာတွင်ဖုန်းထပ်ဆက်ပြန်သည်။ "သား" အမေ...သားမကြာခင်ပြန်လာတော့ မယ်။ ဒါပေမယ့် အမေ့ ကိုပြောစရာရှိတယ်ဟု့ ပြောသည်။ "အမေ "
ပြောလေသား..ဘာပြောမှာလဲ့ လို့ ပြန်ဖြေလိုက်သည်။ " သား" သားမှာအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်အမေ။ သူကသားနဲ့ စစ်မြေပြင်မှာ အေးအတူပူအမျှ သေတူရှင်ဖက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်သူ့့ကိုအရမ်းခင်တယ်အမေ၊သူလည်းသူ့ ကိုယ်သူချစ်သလောက်သားကိုချစ်တယ်အမေဟုပြောပြီးဆက်ပြောသည်။်သူ့ ကို အမေရိကမှာ သားနဲ့ အတူခေါ်ခဲ့ ချင်တယ်အမေဟုပြောသည်။ "အမေက" အော်..ခေါ်လာခဲ့ ပေါ့ သားရယ်..သားရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းပဲ့ ..သားအတွက်အဖော်လည်းရတာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် သားအမေ့ ကို တောင်းခံစရာ ရှိတယ်အမေဟု မရဲ့ မဝံ့ ပြောပြီးမိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်ငြိမ်သွားပြီးနောက်...
သားသူငယ်ချင်းက စစ်မြေပြင်မှာ မိုင်းဗုံးထိလို့သူ့ ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံး မရှိတော့ ဘူးအမေလို့ ပြောရင်းအမေ့ ဆီကတုန့် ပြန်စကားကိုငြိမ်သက်စွာနားထောင်လေတော့ သည်။ "အမေ" ဘုရားရေ...သားရယ်..သားရဲ့ သူငယ်ချင်းကဒုက္ခိတ ဆိုတော့မလွယ်ဘူးထင်တယ်သားရယ်။ အမေကအလုပ်နှစ်လုပ် လုပ်တာလေ။အဲ့ ဒီတော့ သူ့ ကိုပြုစုဖို့အမေ့ မှာ အချိန်မရှိဘူးလေသားရယ်. မိသားစုအတွက်သူက အပူအပင်ဒုက္ခအိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့ လို့ ပြန်ပြောလိုက်သည်။ စစ်သားလေးမှာ မျှော်လင့် ချက်မဲ့ သော ငိုရှိုက်သံဖြင့် ဘာမှမပြောပဲ့ ဖုန်းချလိုက်သည်။။။
သုံးရက်လောက်အကြာတွင်အမေရိကနိုင်ငံရှိ မိဘများရှိရာအိမ်ရှေ့ သို့ အရေးပေါ်ကားတစ်စီးရောက်လာသည်။ မိခင်သည် ရုတ်တရပ် အိမ်ထဲ့ မှ ထွက်ကြည့် သည်မှာ. အလောင်းတစ်လောင်းနဲ့ဝီးချဲ့ (wheel chair )တစ်စီးတွေ့ ရသည်။ ထိုအလောင်းမှာ သူတို့ ၏တစ်ဦးတည်းသောသားပင်ဖြစ်လေ၏။ ဝှီးချဲ့ နဲ့ အတူစာတစ်စောင်ပါလာသည်။ စာထဲ့ မှာ "အမေနဲ့ အဖေ.. သားမရှိတော့ ပေမဲ့သားရဲ့ ဝှီးချဲ့ လေးကို စောင့် ရှောက်ပေးပါ။" ဟုရေးထားလေသည်။ အကယ်စင်စစ်တွင် သားရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးမရှိသူ ဒုက္ခိတ ဆိုသူမှာ ထိုမိဘနှစ်ပါးရဲ့ တစ်ဦးတည်းသော သား စစ်သားလေးပင်ဖြစ်လေသည်။ စစ်သားလေးခမျာ်သူ ဒုက္ခိတဖြစ်နေသောအကြောင်းကို့ မိဘနှစ်ပါးအားတိုက်ရိုက် မပြောဝံ့ ပဲ့ သူ့မိဘများ၏သဘောထားကိုသိလိုသောကြောင့်သူငယ်ချင်းဟု တွယ်ဝှိုက်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ သော် ဒုက္ခသည် က မိသားစုအတွက် အပူပင်ဒုက္ခအိုးကြီးတစ်ခုဟု မိဘတို့ ၏တုန်းပြန်စကားကိုကြားရသဖြင့် သူ့ ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ .........
ပုံပြင်လေးရဲ့ အဆုံးမှာ ကျနော့် ပါးပြင်ကနေတဆင့် နုတ်ခမ်းပေါ်အထိမျက်ရည် တွေ ရွှဲ့ နေသည်ကိုကျွန်တော်သတိလိုက်မ်ိတယ်။ ဆရာမမျက်နှာမှာလည်း မျက်ရည်ကြောင်းနှစ်ကြောင်း စီးနေတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာမပေးတဲ့တီးရှုးနဲ့ မျက်ရည်တွေတုတ်ရင်းဆရာမကိုကျနော်တစ်ချက်မေးခွန်းမေးလိုက်တယ်။ ဆရာမ..ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ပုံပြင် ကိုမှ ရွေးပြီးကျနော့်အတွက် ဥပမာပေးရတာလဲ့ ဆိုပြီးတော့ ပေါ။ ဆရာမပြန်ပြောတယ် ပီတာ..မင်းငါ့ နာမည် ကို သိလားတဲ့ ။ ဒါနဲ့ ကျနော်က သိတယ်လေဆရာမ။ ဆရာမ နာမည်က Miss Betty လေ လို့ ပြောလိုက်တော့ဆရာမကထပ်မေးတယ် Miss ဆိုတဲ့ အဓိပါယ် ကို သိလားတဲ့ ။ ကျတော်လည်း ပွင့် ပွင့် လင်းလင်း Miss ဆိုတာ လက်မထပ် ရသေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ နာမည်ရှေ့ မှာ ခံပြီးသုံးရတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဟုတ်တယ်.မင်းပြောတာမှန်တယ်တဲ့ ။ ဒါပေမယ့် ဆရာမ မှာ အိမ်ထောင်ရှိတယ် လို့ ဆရာမကပြောတယ်။ ကျွန်တော့် အံ့ ဩစွာနဲ့ ဒါဆိုဆရာမတို့ ကွဲနေကြတာလားဟင်.။ ဆရာမ က မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆရာမ တို့လွန်ခဲ့ တဲ့ အနှစ်သုံးဆယ်လောက်တုံးက လက်ထပ်ခဲ့ ကြတယ်။ လက်ထပ်ပြီးတစ်ပတ်လောက် မှာ ပဲ့ ဆရာမရဲ့ ယောင်္ကျားဟာဆိုလို့ရှိ၇င် ကမ္ဘာမှာ စစ်မငြိမ့် နိုင်သေးတဲ့အာဖကန်နယ်ဆတန် နိုင်ငံကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ သွားခဲ့ ပါတယ်။ စစ်မှုထမ်ပြီးမကြာပါဘူး နှစ် နှစ်လောက်မှာ ဆရာမရဲ့ ယောင်္ကျား စစ်ပွဲ့ ထဲ့ မှာ ကျဆုံးသွားခဲ့ ပါတယ်တဲ့ ။ ဒါပမယ့် ဆရာမ ခု အသက် ၅၀ ကျော်တဲ့ အထိဘယ်တစိမ်းယောင်္ကျားကိုမှ လက်ထပ်ဖို့ လက်မခံခဲ့ ဘူး။ ဘယ်တော့ မှလည်းလက်ထပ်မှာ မဟုတ်တော့ ပါဘူး။ ဘာလို့ လဲ့ ဆိုတော့ဆရာမရဲ့ချစ်တဲ့ ယောင်္ကျားအပေါ်မှာထားခဲ့ တဲ့ ဂတိ့သစ္စာတရားတွေကခုထိ မပြယ်ပျောက်နိုင်အောင်တည်မြဲ့ နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ ဆရာမ သေသွားလို့ ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့ အချိန်ထိ သစ္စာရှိစွာနဲ့သူ့ ကိုချစ်သွားမှာမို့ လို့ ပါတဲ့ ။
ဆရာမရဲ့ ရင်ထဲ့ က စကားတွေကိုကြားလိုက်တဲ့ အခါ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ့ မှာ ...ဩော် ငါတစ်ယောက်တည်းလောက မှာ အပူပင်ရှိတဲ့ လူ၊ဒုက္ဒရောက်တဲ့ သူမဟုတ်ဘူးပဲ့လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ အခက်အခဲ့အပူအပင်ရှိကြတာပဲ့ ဆိုတာကိုရင်ထဲ့ နှစ်နှစ်ခါခါခံစားရပါတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်လွန်ခဲ့ တဲ့ အပါတ်တုန်းက မြန်မာပြည်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော့် ရဲ့ ဒုက္ဒပြသနာတွေကို ဆရာမ မျက်ရည်ကျ့အောင်ရင်ဖွင့် ခဲ့ တုန်းကဆို အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေမှာ ဘာအခက်အခဲ့ မှ ငါလောက်ခက်ခဲ့ တာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ခဲ့ တာ။ ဩော်..ခုကျတော့ လူတိုင်းမှာ အခက်ခဲ့ ဆိုတာရှိကြမှာပဲ့တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အခက်ခဲ့ ချင်းကတာ မတူညီကြတာပဲ့ လားဆိုတာ ကျတော့် ဘဝအတွက် သင်ခန်းစာတစ်ခု လို့ လည်းရင်ထဲ့ မှာ တံဆိတ်ခက် မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဆရာမပြောသွားတဲ့ အကောင်းဆုံး (ဥပမာ)ပုံပြင်ထဲ့ ကလိုပဲ့အခက်ခဲ့ ၊ဒုက္ဒ၊ပြသနာ အထွေထွေ ဆိုတာဟာ သူများဆီမှာ ပဲ့ အမြဲ့ ရှိနေမှာ မဟုတ်ပါဘူး တစ်နေ့ မမျှော်လင့် ပဲ့ ကိုယ့် ဘဝထဲ့ ကိုဆိုးကျိူးတွေရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပြောချင်တာက လူမျိုးဘာသာမရွေး၊ဂိုဏ်းဂဏမခွဲ၊ ဆင်းရဲ့ ချမ်းသာ၊ မျက်ကမ်းမျက်မြင်၊ လူအ လူတော်၊ သန်မာသည်ဖြစ်စေ ချိနှဲ သည်ဖြစ်စေ အရောင်အဆင့် တန်းမခွဲ့ ပဲ့ ကူညီဖေးမ လက်တွဲ ရိုင်းပင်းကြပါစို့ လားလို့ ..
Posted by Thant Zin Minn at 1:02 AM